files - Synonyms of files | Antonyms of files | Definition of files | Example of files | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for files
Top 30 analogous words or synonyms for files
MATLAB ကွန်ပျူတာတွင် MATLAB ဖန်ရှင်များ ပေးအပ်ရန် MCR (MATLAB Component Runtime) လိုအပ်သည်။ MCR ကိုမူ MATLAB compiler မှထုတ်သော library files များ သုံးစွဲရန် လွှက်လက်စွာ ဖြန့်ချီနိုင်သည်။
MATLAB MATLAB သည် C programming language သို့မဟုတ် Fortran များ ကို ခေါ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ ထို့အတွက် MATLAB data type များ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရန် wrapper function တစ်ခု လိုသည်။ ထိုဖန်ရှင်များကို လိုအပ်သည့်သလို ခေါ်ယူသုံးစွဲနိုင်သော "MEX-files" ဟုခေါ်ပြီး ၎င်း၏ extension မှာ operating system အပေါ် မူတည်သည်။
ခရက်ကာ တစ်ချို့ Software တွေကျတော့ Serial လည်းမတောင်းပါ။ Activation လည်းမတောင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ သုံးပြီး တစ်ပတ်လောက်နေမှ register လုပ်ခိုင်းပါသည်။အင်တာနက်နှင့်သာ လုပ်ခိုင်းပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ software မျိုးဆိုလျှင် exe file ကိုအစားထိုးလုပ်ခြင်းဖြင့် Crack လုပ်ရပါသည်။ ဥပမာပြရလျှင် Photoshop CS3 ဆိုလျှင် Installer CD အတွင်းရှိ Crack Folder ထဲတွင်ရှိသော Photoshop.exe File ကို Copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Adobe\_Photoshop CS3 Folder ထဲသို့ replace လုပ်ရခြင်းမျိုးကို ခေါ်ပါသည်။တခါတရံတွင်တော့ .exe File မဟုတ်ဘဲ .dll ဖိုင်များကို သွားထည့်ရခြင်းမျိုးလည်းရှိတတ်ပါသည်။
AIDS (ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်) "ATTENTION I have been elected to inform you that throughout your process of collecting and executing files, you have accdientally ¶HÜ¢KΣ► [PHUCKED] yourself over: again, that's PHUCKED yourself over. No, it cannot be; YES, it CAN be,a√ìτûs [virus] has infected your system. Now what do you have to say about that? HAHAHAHAHA. Have ¶HÜÑ [PHUN] with this one and remember, there is NO cure for AIDS"